ဥရောပသားတှရေဲ့ ကံမကောငျးစတေတျတဲ့ နံပါတျ(၁၃)ဟာ အာတီတာအတှကျ ကံမကောငျးစတေဲ့နံပါတျတဈခုဖွဈသှားစမှောလား…? – Premier League Special
ဥရောပသားတှရေဲ့ ကံမကောငျးစတေတျတဲ့ နံပါတျ(၁၃)… ဆောကျသမျတနျနဲ့ ကစားမယျ့ ဒီညပှဲဟာ ပရီမီးယားလိဂျပှဲစဉျတှရေဲ့ (၁၃)ခုမွောကျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ လူတိုငျးအတှကျထူးခွားတဲ့ နံပါတျတဈခုဖွဈခွငျမှဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဆောကျသမျတနျနဲ့ ကစားမယျ့ ဒီညမှာသာ အာဆငျနယျရှုံးနိမျ့ခဲ့မယျဆိုရငျ ဒီပှဲမှာ အာတီတာအတှကျ ကံမကောငျးစတေဲ့နံပါတျတဈခုဖွဈသှားစမှောဖွဈပွီးသူ့အတှကျ နောကျဆုံးပှဲတဈပှဲဖွဈသှားမယျ့သဘောရှိနပေါပွီ။ ရလဒျပိုငျးတှဆေိုးရှားနခေဲ့သလို ကစားသမားတှရေဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာလညျးရနျလိုစိတျတှမြေားနတေဲ့ ဇာခါတို့လို ကစားသမားတှရှေိနတောကွောငျ့ပရိသတျတှကေ အာဆငျနယျရဲ့ ဒီနှဈရာသီကို စိတျအတျောပကျြနကွေပါပွီ။ အာတီတာဟာလညျး အာဆငျနယျရဲ့ စီနီယာကစားသမားတှနေဲ့ အဆငျမပွဖွေဈနခေဲ့ပွီးနောကျ အဝတျလဲခနျးမှာ စီနီယာ ကစားသမားတှရေဲ့ ထောကျခံမှု ကဆြငျးလာတာဟာ အသငျးသားတှေ အားလုံး အပျေါ ရိုကျခတျမှု ကွီးမားလာခဲ့ပွီး ရလဒျတှကေိုပါ ထိခိုကျမှု ရှိလာနတော ဖွဈပါတယျ။
အိုဇေးလျ နဲ့ ဆိုကရကျတဈ တို့ နှဈဦးကို အသငျး လူစာရငျးကနေ ခနျြလှပျ ခဲ့တာဟာလညျး အသငျးအတှငျး မတညျမငွိမျ ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး တှထေဲက တဈခုဖွဈနပေါတယျ။ ခရှနျကီ မိသားစုရဲ့ထောကျခံအားပမှေုရနပေမေယျ့ ပရိသတျတှကေတော့ အာတီတာ ရဲ့ အစီအစဉျတှကေို သဘောမကြ ဖွဈလာနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျပှဲတှသောအမွနျ မရလာတော့ရငျ ပရီမီးယားလိဂျမှာ နညျးပွရာထူးကနေ အရငျဆုံးထုတျပယျခံရမယျ့သူဟာ အာတီတာဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
အာတီတာအတှကျ အာဆငျနယျပရိသတျတှအေနနေဲ့ သီးခံနိုငျစှမျးကုနျဆုံးသှားခဲ့တဲ့ပှဲစဉျဟာ ဘနျလနေဲ့ပှဲစဉျပါပဲ။ ဘနျလလေို အသငျးမြိုးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ အပျေါမှာလညျး အာဆငျနယျပရိသတျတှကေ အကွီးအကယျြကို ပေါကျကှဲခဲ့ကွတာ ဟာလညျး ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှောတှမွေ့ငျကွရမှာပါ။
အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဘနျလကေို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး အိမျကှငျးစံခြိနျ တငျသှားခဲ့ပွီး အဆိုပါ အခွအေနအေပျေါ ပရိသတျတှကေ ပေါကျကှဲနကွေပါတယျ။ ဂနျနားတှဟော အဆိုပါ ပှဲစဉျအတှငျး အဘကျအဘကျက အသာစီးရခဲ့ပမေဲ့ ရှာကာ အနီကတျထိခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ခွစှေမျးကဆြငျးသှားကာ အူဘာမီယနျရဲ့ OGဂိုးကွောငျ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျအပွီးမှာတော့ ပရိသတျတှကေ နညျးပွ အာတီတာကို ထုတျပယျပေးဖို့ တောငျးဆိုတာ၊ အာဆငျနယျ ကစားသမားတှရေဲ့ အားထုတျပုံကိုလညျး ဒေါသတကွီး ဝဖေနျသူတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
အခြို့ ပရိသတျတှကေ ယခုနှဈ ရာသီအစဟာ နှဈ၅၀အတှငျး အဆိုးဆုံးပဲလို့ ပွောခဲ့ကွပွီး အခြို့ဆို နညျးပွကွီး အာစငျဝငျးဂါး ပွနျပေးဖို့တောငျ တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
အာတီတာကတော့ “စှမျးဆောငျရညျ ကနြတေယျဆိုတာ မှနျပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျတုနျးက ဖွဈခဲ့တာတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ဘာမှ လုပျမရသေးပါဘူး။ အိမျကှငျးပှဲတှကေို အနိုငျရဖို့ လိုတာ သိပါတယျ။ ဒီလို ရလဒျတှကေိုလညျး ခကျြခငျြး ပွောငျးလဲမှု ပွုလုပျဖို့ လိုနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရာသီ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ပွနျရှငျသနျနိုငျအောငျ အိမျကှငျးပှဲတှကေို အနိုငျရဖို့ လိုပါတယျ”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဂြော့ချြဝကျတျလို့အမညျရတဲ့ အာဆငျနယျ ပရိသတျတဈဦးကတော့ စိတျပကျြပေါကျကှဲနမှေုကို လူမှုကှနျရကျပျေါ တငျခဲ့ရာမှာ လူတှကွေား ပြံ့နှံသှားခဲ့ပါတယျ။
ဂြော့ချြဝကျတျက “တျောလောကျပွီ။ ဘနျလကေို အိမျကှငျးမှာ ၁-ဝနဲ့ ရှုံးတယျ။ ငါကတော့ တျောတျော စိတျကုနျနပွေီ။ ငါ မငျးဘကျကနေ ကာကှယျပေးခဲ့တယျ အာတီတာရေ။ ဒါပမေဲ့ မငျး သှားလိုကျတော့။ အဲ့မှာ တံခါးရှိတယျ”
“ရိုးရိုးသားသား ပွောရရငျ ရှာကာလညျး လဈတော့။ ငါ စိတျကုနျနပွေီ။ ၁-ဝနဲ့ ရှုံးနတောကို နောကျပွနျပေးနကွေတယျ။ အူဘာမီယနျ။ မငျး စာခြုပျသဈအတှကျ ဝနျထမျး ၅၅ယောကျ ဖွုတျခဲ့ရတယျ။ အဲ့ဒါကို မငျးဘယျလိုပေးဆပျလဲ။ ဘာမှ လုပျမပွနိုငျဘူး။ ဒါပမေဲ့ မငျးကိုပဲ အပွဈတငျနတော မဟုတျဘူး။ အာတီတာလညျး သှားလိုကျတော့”
“ငါမငျးကို ထောကျခံခဲ့တယျ။ အရငျကတညျးကပဲ။ အခုတော့ တျောပွီး။ တနျးဆငျးဇုနျနဲ့ ၅မှတျပဲ ကှာတယျ။ ဘနျလလေို အသငျးကို ရှုံးတယျ။ တျောလောကျပွီ။ ငါ တျောတျော စိတျပကျြနပွေီ။ ဘာမှထပျမပွောခငျြတော့ဘူး”လို့ ဗီဒီရိုကျပွီး တငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုအခွအေနတှေအေထိ အာဆငျနယျပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေိုကွုံနရေတဲ့အခြိနျမှာ ဆောကျသမျတနျ၊ အဲဗာတနျ၊ မနျစီးတီး ခြဲလျဆီးတို့လို အသငျးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ရတာကတော့ အာတီတာအတှကျ အာဆငျနယျနဲ့နှုတျဆကျရမယျ့အခြိနျရောကျပွီလို့….
ဥရောပသားတွေရဲ့ ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့ နံပါတ်(၁၃)ဟာ အာတီတာအတွက် ကံမကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သွားစေမှာလား…?
ဥရောပသားတွေရဲ့ ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့ နံပါတ်(၁၃)…ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ကစားမယ့် ဒီညပွဲဟာ ပရီမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေရဲ့ (၁၃)ခုမြောက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်မှဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ကစားမယ့် ဒီညမှာသာ အာဆင်နယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီပွဲမှာ အာတီတာအတွက် ကံမကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက် နောက်ဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သွားမယ့်သဘောရှိနေပါပြီ။ ရလဒ်ပိုင်းတွေဆိုးရွားနေခဲ့သလို ကစားသမားတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရန်လိုစိတ်တွေများနေတဲ့ ဇာခါတို့လို ကစားသမားတွေရှိနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေက အာဆင်နယ်ရဲ့ ဒီနှစ်ရာသီကို စိတ်အတော်ပျက်နေကြပါပြီ။ အာတီတာဟာလည်း အာဆင်နယ်ရဲ့ စီနီယာကစားသမားတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက် အဝတ်လဲခန်းမှာ စီနီယာ ကစားသမားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု ကျဆင်းလာတာဟာ အသင်းသားတွေ အားလုံး အပေါ် ရိုက်ခတ်မှု ကြီးမားလာခဲ့ပြီး ရလဒ်တွေကိုပါ ထိခိုက်မှု ရှိလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိုဇေးလ် နဲ့ ဆိုကရက်တစ် တို့ နှစ်ဦးကို အသင်း လူစာရင်းကနေ ချန်လှပ် ခဲ့တာဟာလည်း အသင်းအတွင်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ခရွန်ကီ မိသားစုရဲ့ထောက်ခံအားပေမှုရနေပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ အာတီတာ ရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သဘောမကျ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ပွဲတွေသာအမြန် မရလာတော့ရင် ပရီမီးယားလိဂ်မှာ နည်းပြရာထူးကနေ အရင်ဆုံးထုတ်ပယ်ခံရမယ့်သူဟာ အာတီတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အာတီတာအတွက် အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ သီးခံနိုင်စွမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဟာ ဘန်လေနဲ့ပွဲစဉ်ပါပဲ။ ဘန်လေလို အသင်းမျိုးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေက အကြီးအကျယ်ကို ပေါက်ကွဲခဲ့ကြတာ ဟာလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဘန်လေကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး အိမ်ကွင်းစံချိန် တင်သွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ အခြေအနေအပေါ် ပရိသတ်တွေက ပေါက်ကွဲနေကြပါတယ်။
ဂန်နားတွေဟာ အဆိုပါ ပွဲစဉ်အတွင်း အဘက်အဘက်က အသာစီးရခဲ့ပေမဲ့ ရှာကာ အနီကတ်ထိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ခြေစွမ်းကျဆင်းသွားကာ အူဘာမီယန်ရဲ့ OGဂိုးကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေက နည်းပြ အာတီတာကို ထုတ်ပယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ၊ အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေရဲ့ အားထုတ်ပုံကိုလည်း ဒေါသတကြီး ဝေဖန်သူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့ ပရိသတ်တွေက ယခုနှစ် ရာသီအစဟာ နှစ်၅၀အတွင်း အဆိုးဆုံးပဲလို့ ပြောခဲ့ကြပြီး အချို့ဆို နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါး ပြန်ပေးဖို့တောင် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အာတီတာကတော့ “စွမ်းဆောင်ရည် ကျနေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဘာမှ လုပ်မရသေးပါဘူး။ အိမ်ကွင်းပွဲတွေကို အနိုင်ရဖို့ လိုတာ သိပါတယ်။ ဒီလို ရလဒ်တွေကိုလည်း ချက်ချင်း ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီရာသီ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြန်ရှင်သန်နိုင်အောင် အိမ်ကွင်းပွဲတွေကို အနိုင်ရဖို့ လိုပါတယ်”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျဝက်တ်လို့အမည်ရတဲ့ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တစ်ဦးကတော့ စိတ်ပျက်ပေါက်ကွဲနေမှုကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ် တင်ခဲ့ရာမှာ လူတွေကြား ပျံ့နှံသွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျဝက်တ်က “တော်လောက်ပြီ။ ဘန်လေကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁-ဝနဲ့ ရှုံးတယ်။ ငါကတော့ တော်တော် စိတ်ကုန်နေပြီ။ ငါ မင်းဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ် အာတီတာရေ။ ဒါပေမဲ့ မင်း သွားလိုက်တော့။ အဲ့မှာ တံခါးရှိတယ်”
“ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ရှာကာလည်း လစ်တော့။ ငါ စိတ်ကုန်နေပြီ။ ၁-ဝနဲ့ ရှုံးနေတာကို နောက်ပြန်ပေးနေကြတယ်။ အူဘာမီယန်။ မင်း စာချုပ်သစ်အတွက် ဝန်ထမ်း ၅၅ယောက် ဖြုတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကို မင်းဘယ်လိုပေးဆပ်လဲ။ ဘာမှ လုပ်မပြနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းကိုပဲ အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အာတီတာလည်း သွားလိုက်တော့”
“ငါမင်းကို ထောက်ခံခဲ့တယ်။ အရင်ကတည်းကပဲ။ အခုတော့ တော်ပြီး။ တန်းဆင်းဇုန်နဲ့ ၅မှတ်ပဲ ကွာတယ်။ ဘန်လေလို အသင်းကို ရှုံးတယ်။ တော်လောက်ပြီ။ ငါ တော်တော် စိတ်ပျက်နေပြီ။ ဘာမှထပ်မပြောချင်တော့ဘူး”လို့ ဗီဒီရိုက်ပြီး တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေအထိ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာ ဆောက်သမ်တန်၊ အဲဗာတန်၊ မန်စီးတီး ချဲလ်ဆီးတို့လို အသင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတာကတော့ အာတီတာအတွက် အာဆင်နယ်နဲ့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့….